Izicelo ezi-5 ezilungileyo kakhulu zokuhlawula i-Android | I-Androidsis
Ezona zixhobo zi-5 zihlawulelwayo kakhulu ze-Android
UPaco L Gutierrez | 25/04/2021 10:00 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izaziso
Kukho amawaka ezicelo zasimahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle ye-Android kwaye kukho zona phantse kuwo nawuphi na umsebenzi esiwufunayo, kodwa azisoloko zihamba phambili. Ingxaki esihlala siyifumana kwiVenkile ye-Android kukuba sihlala sifumana amakhulu ezicelo ezisebenzela injongo enye naphakathi kwazo zonke ezasimahla siyadinwa kukufumana intengiso ephezulu kakhulu okanye iintlawulo ezincinci ukufikelela kuwo wonke umxholo, Oku kubangela ukuba sigqibe ukuhlawula okanye susa intengiso okanye ukufikelela kuyo yonke into esiyifunayo.
Eyona nto ifanelekileyo kukufumana usetyenziso olulungele iimfuno zethu kwaye uluvavanye, kuba uninzi lwezicelo ezihlawulelweyo zinenguqulo yolingo. Ukuba isicelo sikufanele oko, akuyi kuba buhlungu ukuhlawula into abasicelela yona, kuba siyakuhlala siyigcina ihlaziywa, siyakuphepha intengiso ekruqulayo kwaye ngethamsanqa siya kunika igranite yethu kubaphuhlisi ukuze baqhubeke nokusebenza kwisicelo ukuyiphucula ngohlaziyo ngalunye. Silandele ukufumanisa ukuba zeziphi ezona zicelo zilungileyo zokuhlawula ze-Android.
2 Nova Qalisa Prime
3 Iprojekti engaphezulu
5 Umfundi weLegere
Umhleli wesithombe ogqwesileyo osibonelela ngezixhobo ezininzi zokubamba iifoto zethu ngokususa naliphi na icandelo elingafunekiyo. Isicelo esivumela ukuba sisuse kwiintambo zombane kwifoto esixekweni ukuya kwizithuthi okanye iibhayisekile ezijikeleza wena ngexesha lokufota. Kwimeko yeefoto zemizobo, sinokuphelisa naliphi na ibala kulusu, amaqhakuva okanye into eyenziweyo ngenxa yesifinyezo ngokwaso.
Ukuba ungumthandi wokufota, esi sicelo sixabisa yonke ipenathi ye- € 1,99 Ixabisa kwi-PlayStore kuba isisindisa ekusebenziseni abahleli bezithombe kwikhompyuter okanye ukulwa nabanye abahleli be-Android abantsonkothileyo.
Umthuthukisi: I-ADVA Isithambileyo
ixabiso: € 1,99
Nova Qalisa Prime
Esinye isicelo esingenakuphulukana noluhlu ngezona zicelo zibalaseleyo yiNova Launcher Prime kwaye zimbalwa izinto ezibaluleke ngakumbi kwisiphelo se-Android njengokuzenzela okungapheliyo, ngalo Mqalisi akufuneki ukuba sikhathazeke malunga nokuba okanye hayi Umsebenzi wobugcisa kunomnye ukuba unawo, okanye ngu Iimpawu zeempawu nangobungakanani, kunye ne Ukuvula ngempompo kabini okanye izijekulo zesikrini ukuthatha umfanekiso weskrini.
Ngalesi sicelo siza kuba nokufumana ulungelelwaniso olungapheliyo lwesiphelo sethu, ukwenza iselfowuni yethu ukuba ikhetheke emhlabeni. Nje ukuba uyiqhele, awukho omnye umaleko wokwenza ngokwezifiso owonelisa. Isicelo sinika ithuba lokugcina imisebenzi yethu ukuze siyilayishe kwezinye iitermina kwaye ngenxa yoko akufuneki siqale kwi-0 ukuba sitshintsha iselfowuni.
Isicelo sesimo sezulu esibonelela ngemisebenzi engapheliyo okanye ngokwezifiso iiwijethi. Alithandabuzeki elona limo sezulu lincinci kwiVenkile yokudlala kwaye inikezela uluhlu olubanzi lwamawijethi esikrinini sasekhaya ngokunjalo Umxholo omnyama, izaziso ngokwezifiso kunye noqikelelo lweyure kunye nokusetyenziswa kwezixhobo eziphantsi kakhulu.
Isicelo sibiza imali ethe kratya ukuba siyasithelekisa nezinye iinkqubo zemozulu, kodwa ukuba imozulu ibalulekile kuthi kwaye sidiniwe kukukhangela leyo ilungele oko sikufunayo, ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ilungileyo. Ukongeza ekubeni sisicelo esihle ngobuhle, ibonelela ngemvelaphi yoopopayi kuyo yonke imeko yemozulu y Akukho ntengiso Ukubhatalwa. Isicelo sibiza i- € 10,99 enokubonakala ngathi iyabiza, kodwa ukuba siyaluthanda olu hlobo lwesicelo asiyi kuzisola kuba inenqwaba yomxholo, ukongeza kuhlaziyo oluqhubekayo.
Iprojekti engaphezulu kwephimo- Imozulu yoopopayi kunye neeWijethi
Umthuthukisi: Ngamashumi amathathu anesine
Ngokuqinisekileyo singomnye wabo babekhe benza iifowuni ezimbalwa kwi-PC kwaye ngenxa yeemeko zangoku, kufuneka sizenzele umsebenzi okanye sinxibelelane nosapho okanye nabahlobo. Ngokwesiqhelo iikhamera ezakhelwe kwiikhompyuter zikumgangatho ophakathi, ngakumbi ukuba ikhompyuter yinto endala. Nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo iikhamera zeselfowuni zethu zinomgangatho owamkelekileyo okanye olunge kakhulu kwimeko yokuba nesiphelo esisesiphakathi okanye esisekupheleni. Nangona isicelo singabizi kakhulu, i- € 4,99 iyavakala ukuba sijonga ukuba ikhamera yewebhu yomgangatho ofanayo iya kusixabisa imali eninzi.
Nge-DroidCamX singasebenzisa iikhamera zeselfowuni njengekhamera yewebhu kwikhompyuter yethu esemgangathweni olungileyo, sisebenzisa i-WiFi ekhayeni lethu okanye ngentambo ye-USB usebenzisa i-USB debugging. Kuya kufuneka sikhumbule ukuba ukusebenzisa esi sicelo kufuneka sifake inkqubo kwikhompyuter yethu sisebenzisa imodyuli yesoftware ephindwe kabini. Isicelo sePC yethu sikhutshelwa ngqo kwifayile yakho ye- iwebhusayithi esemthethweni. Xa zombini izicelo zivulekile kwaye izixhobo zidityaniswe kwi-router efanayo, iDroidcamX iya kugqithisela iaudiyo nevidiyo esiyithathayo ngeselula ekhompyuter yethu.
I-DroidCam-Ikhamera yeWebhu yePC
Ayikho inkampani ebhetele kwezentlalo kunye nenkcubeko kunencwadi elungileyo ngalo naliphi na ixesha okanye indawo kwaye asisoloko sinomnqweno okanye ukukhanya okwaneleyo kokufunda ngoxolo lwengqondo. Esi sicelo sisinika Ukufunda iincwadi kwiifomathi ezahlukeneyo ezinjengePDF, TXT, DOC, Epub. Ukufundwa kwenziwa ngelizwi elenziweyo lomgangatho ophezulu, phakathi kwawo sinamazwi kwiilwimi ezingama-54 ezahlukeneyo, phakathi kwazo sifumana iSpanish, isiCatalan, isiNgesi okanye isiTaliyane.
Esi sicelo silungele abafundi abangaboni kakuhle abangafuni ukuyeka ukufunda ngaphandle kwengxaki yamehlo. Isicelo sinomdla kwaye sinika iimenyu ezilula ukuze nabani na akwazi ukuhamba akukho ngxaki yokusetyenziswa. ILegere Reader ivumela ukulayishwa kweencwadi kwizicelo zomntu wesithathu ezinje ngeDropbox okanye iCloud, nje ukuba ilayibrari ilayishwe sinokukhetha incwadi ngokuxhomekeke kwifomathi okanye indawo ekuyo ifayile. Nangona usetyenziso lusenokubonakala lubiza ixabiso le- € 9,99, kubonakala ngathi litshiphu xa kuthathelwa ingqalelo abaphulaphuli ekujoliswe kubo kunye nomgangatho wayo.
Umthuthukisi: ILegere Technologies LLC
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zixhobo zi-5 zihlawulelwayo kakhulu ze-Android
Uzifumana njani iigugu zasimahla kwiiBrawl Stars
Yintoni kwaye isebenza njani i-Uber Eats?